प्राधिकरणमा ज्ञवालीलाई हटाएर पोखरेललाई ल्याइयो - Pahilo News
०८ असोज २०७४, आइतबार
प्राधिकरणमा ज्ञवालीलाई हटाएर पोखरेललाई ल्याइयो
२७ पुस । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय बिदाको पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।
कुन दिवसमा राष्ट्रिय बिदा दिने, कुन दिवस र पर्वमा प्रादेसिक र स्थानीय स्तरमा बिदा दिने भन्नेबारे सुझाव पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्तिको अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुको करार अवधि एक वर्षको हुने पनि प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दोस्रो नम्बरमा खुम्चिनु परेको नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा धेर..
प्रदेश नं. ७ को तर्फबाट उपाध्यक्ष भीम रावलले भने प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा स्थायी समितिले ..
नेता कर्णले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशमा हामीले सोचेजस्तो परिणाम आउन सकेन । हामी पहिलो पार्टी नै बन्छौं भनेर चुनावमा..
जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा एमाले विजयी
सो उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका डा. कृष्ण पौडेल १४ हजार ८ सय ६५ मत ल्याई विजयी भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्..
सो उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका डा. कृष्ण पौडेल १४ हजार ८ सय ६५ मत ल्याई विजयी भएका ..
‘पहिलो शक्ति’ बन्ने राजपाको सपना यसरी तुहियो
मधेसमा राजपाले अपेक्षाकृत रुपमा सफलता नपाउनु र मूलधारका राजनीतिक दलहरुकै वर्चश्व रहनुमा..